सञ्चारमन्त्रीले भने- एसिया प्यासिफिक समिटमा... :: मनोज सत्याल :: Setopati
सञ्चारमन्त्रीले भने- एसिया प्यासिफिक समिटमा कोइराला जाँदा शान्तिदूत, ओली जाँदा अपराधी?
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाबाट पत्रकारहरूलाई पत्रकारिताको पाठ पढाउने क्रम जारी छ।
अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सूचना 'क्रस भेरिफाई' गरेर मात्र समाचार लेख्नुपर्ने ज्ञान बाँडेका थिए। समाचारलाई 'रेस्लिङ' सँग तुलना गर्दै पत्रकारहरूले असत्य कुरा पनि वास्तविकझैं प्रस्तुत गर्न थालेको उनको भनाइ थियो।
पत्रकारिता सिकाउने क्रमलाई उनले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि निरन्तरता दिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले सूचना लुकाउन थालेको विषय उठाउँदै पत्रकारहरूले सोधेका थिए, ‘शाही शासनमा जस्तो एकद्वार शैलीमा सूचना दिन लागिएको त हैन?’
जवाफमा बास्कोटाले भने, ‘शाही शासन शब्दले उदेक लाग्छ। सूचना लुकाएको होइन, आजको समस्या सूचना तोडमोडको हो।’
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको विषयलाई मिडियाले बढ्तै तोडमोड गरेको उनले आरोप लगाए। ‘पुरानो पुरानो विषय उठान गरिएको छ। फोटोमा पनि को हटाउने को राख्ने भनेर 'सेलेक्सन' गरी भ्रम छरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले देखेका छौँ।’
उनले एसिया प्यासिफिक समिटसम्बन्धी समाचारलाई भक्तमान श्रेष्ठ र दिलशोभा प्रकरणसँग तुलना गरे। भने, ‘आक्षेप जे पनि लगाएको छ, जवाफदेहिता बोक्न नपर्ने।’
उनले भक्तमानको अपहरणमा तत्कालीन माओवादी र अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई दोषारोपण गरिएको सम्झँदै पछि फिरौती मागिएको खुलासा हुँदा पनि कसैले जवाफदेहिता नलिएको आरोप लगाए।
‘दिलशोभा प्रकरणमा सेक्स र्‍याकेटको कुरा गरियो,' उनले भने, ‘खै त्यसमा के भयो मलाई थाहा छैन।’
उनले विगतको एसिया प्यासिफिक समिटमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताहरूले भाग लिएको पनि सम्झाउन भ्याए।
मिडियालाई यति कुरा सुनाएपछि बल्ल मन्त्री बास्कोटा प्रश्नको जवाफ दिन थाले, ‘प्रवक्तालाई बोल्न कहीँ रोक लगाइएको छैन। प्रवक्ताले मन्त्रालयमा भए-गरेका कामबारे बताउनुहुन्छ।’
अर्का पत्रकारले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा ‘सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन’ भन्ने प्रश्न उठेकोमा धारणा मागेका थिए।
यसमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘धारणा स्पष्ट छ। पोष्टर छाप्न मन लाग्नेले लोकतन्त्रमा पोष्टर छाप्न पाइन्छ।’
त्यसपछि उनी समिटकै विषयमा फर्के। भन्न थाले, ‘तपाईंहरूको भाषामा बहुविवादित र मैले भन्दा बहुचर्चित त्यस समिटमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा जाँदा शान्तिका दूत भेटिनुभयो, कोशेढुंगा भयो, अहिले केपी ओली जाँदा अपराधी गएजस्तो व्यवहार गर्नुभयो। यो दृष्टिकोणको कुरा पनि हो।’
त्यसपछि उनले ओली शैलीमै उखान हाले, ‘निहुँ नपाएपछि कनिका बुकाउने भनिन्छ नि, यो त्यस्तै हो।’
उनले धर्मनिरपेक्ष नेपालमा कुनै धर्मबारे घृणा फैलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘युसुफ राजा गिलानी कुन धर्मका हुन्?’ बास्कोटाले भने, ‘पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री यही सम्मेलनमा भेटियो होला नि। ती तथ्यहरू किन यसरी राखिँदैन?’
उनले न्यायाधीश बमको हत्या प्रकरणजस्तै विभिन्न घटनामा दोषी पत्ता लाग्न समय लाग्ने बताए। ‘अपराधी उम्कन सक्दैन,’ उनले मिडियामाथि हमला गर्दै फेरि भने, ‘अरू कुनै मुद्दै नभेटेजस्तो गरी त्यो विषय उठाइएको छ। कुनै बेला गंगामायाका बारेमा कुरा चल्दा मुख थुनेर बस्नेहरू अहिले लेकको जुकाजस्तो, झरीको जुकाजस्तो स्याउँ स्याउँ गरिराख्नुभएको छ।’
उनले एसिया प्यासिफिक समिटलाई लक्ष्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन दुनियाँको साथ चाहिने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीले उक्त समिटमा एसियाली सम्भता र पूर्वीय दर्शनबारे बोलेको सम्झाउँदै उनले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री कुनै धर्मप्रति आशक्त र कुनै धर्मप्रति घृणा फैलाउने पात्र हुन सक्दैन। त्यहाँ बुद्ध धर्मको चर्चा भएको छ। हिन्दु संस्कारको चर्चा भएको छ। त्यो कुरा नलेखेर खै किन यो खेदो र खोइरो खन्न थालेको हो?’
उनले प्रधानमन्त्रीको मिसन र भिजनको कुरा पनि लेखिनुपर्ने बताए। ‘मिसन अर्कै बनाउनुभएको छ भने त …,' बास्कोटाले भने, ‘कुनै मिडियाले गज्जब भनेर फोटो छापेको छापेकै हुनुहुन्छ। सायद त्यो मिडियाको कोही त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो कि।’
उनले सुजाता कोइराला र प्रदिप गिरी समिटमा उपस्थित भएको र धनराज गुरुङले बोलेको कुरा मिडियामा नउठाइएको आरोप लगाए।
‘कोही जाँदा पवित्र भयो, कोही जाँदा भयंकर अपवित्र भयो,’ बास्कोटाले भने, ‘कसले होली वाइन खायो? खानेले खायो होला। प्रधानमन्त्रीले खानुभयो? यस्तो झुट ... सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु सुहाउँदिलो होइन।’
‘मैले पत्रकारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन। ट्रेण्डको कुरा गरेको। कुन ट्रेण्ड पक्रन खोजेको हो? बेलायतको पनि न्यूज अफ द वर्ल्ड भन्ने १०५ वर्षको पत्रिकाका सम्पादकलाई संसदीय समितिले ट्रायलमा राखेको होइन? हामीले आधुनिक पत्रकारिताको कुरा गर्दा यस्तै यस्तै मुलुकलाई मानक बनाएका छौं। त्यसैले तथ्य तोडमोड नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने।
उनले आफूले विज्ञापन रोक्ने धम्की दिएको भनेर एक अंग्रेजी दैनिकले लेखेको बताए। ‘कनिकुथी अंग्रेजी पढेको,’ बास्कोटाले भने, ‘जान्नेहरूले लेख्नुभयो। ठिकै छ भाषाको कुरा। तर के दिन खोजेको हो सन्देश?’
पत्रकारलाई पाठ पढाएपछि उनले निर्मला प्रकरणमा सरकार दोषी पत्ता लगाउन लागिरहेको जवाफ दिए। ‘तपाईंहरूको भाषामा सरकार त्यही दिन भेटिने भयो,’ उनले भने, ‘सरकार लागिरहेको छ।’
अर्का पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजिवीलाई थला पार्ने भनेर टिप्पणी गर्नु र सरकारविरुद्ध मिडिया लागेको ढंगले मन्त्रीबाट गुनासो आउनुले कतै त्रास सिर्जना गर्न खोजिएको त हैन?'
जवाफमा बास्कोटाले प्रतिप्रश्न गरे, 'तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ? मैले गुनासो गरेको होइन, तथ्य राखेको हो।’
‘प्रधानमन्त्रीको भाषण तथ्य हो,’ उनले अगाडि भने, ‘मिडियाप्रति सरकारको कुनै गुनासो छैन। मिडिया आफ्नो पेसाधर्मप्रति इमानदार छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।’
उनले जनताले दस रुपैयाँ तिरेर किनेपछि मिडिया जनताको सम्पत्ति हुने भएकाले जवाफदेहि हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थला पार्ने कुरा गर्नुभएको हैन,’ बास्कोटाले भने, ‘बहसमा उत्रन आह्वान गर्नुभएको हो।’
उनले मिडियालाई स्वस्थ बहसमा आउन आग्रह गरे। ‘तथ्यमा उत्रिउँ न,’ बास्कोटाले भने, ‘भक्तमान प्रकरण तपाईं कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? त्यसमा चार महिना एउटा कुरा लेखियो। केही पनि जिम्मेवारीवहन गरिएन। दिलोशोभाको कुरा पनि त्यही हो। यो तथ्य हो।’
‘यो ट्रेण्डको कुरा हो। सरकार मिडियाविरुद्ध कुनै योजना बनाएर लागेको होइन। बरु सरकारप्रति खै किन हो, निकै धेरै… म फेरि पनि सोध्छु, के गलत कुरा लेख्नु नै पत्रकारिताको पहिलो कर्तव्य हो? सचेत गराउनु, आलोचना गर्नु उसको दायित्व हो। तर, मिडियाले नाममा हुँदै नभएको कुरा ट्विस्ट गरेर कुन पत्रकारिताको धर्म थामेको हो?’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २०, २०७५, २३:१७:००